Saturday February 15, 2020 - 11:12:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mas'uul sare oo katirsan dowladda Mareykanka ayaa xaqiijiyay in heshiis hordhac ah ay lagaareen xarakada Jihaadiga Taliban ee ka dagaallanta wadanka Afghanistan.
Trump ayaa doonayo in uu ciidamadiisa ka badbaadiyo Jaxiimada dagaalka Afghanistan
Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in heshiis hordhac ah laga gaaray qaabka ciidamada Americanka ah ay uga baxayaan wadanka Afghanistan oo muddo 19 sanadood ah ay duullaan ku joogaan.
Saraakiil American ah waxay sheegeen in Donald Trump uu mabda' ahaan ogolaaday in uu saxiixo heshiis ciidamadiisa uu uga saarayo Afghanistan balse marka hore loo baahanyahay heshiis xabad joojin ah oo dhigaya in 7 maalmood wax dagaal ah aysan ka dhicin Afghanistan.
Mas'uuliyiinta Americanka ah ee la hadlay wakaaladaha wararka waxay sheegeen in si hordhac ah ay Taliban kula heshiiyeen xabad joojin socan doonta muddo todobaad ah kadibna Trump uu qalinka ku duugi doono heshiis amraya in ciidamada Mareykanka ay uga baxaan Afghanistan muddo 18 bilood gudahood ah.
Wadahadallo aan loo kala kicin ayaa labada dhinac bilihii lasoo dhaafay uga socday magaalada Dooxa ee wadanka Qadar waxaana xusid mudan intii wadahadalladu socdeen ay Taliban qaadday weeraro weeraro lagu dilay tobanaan askar American ah.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dhanka Taliban oo ku saabsan heshiiskan hordhaca ah ee Mareykanku sheegay in laga gaaray dagaalka ka holcaya wadanka Afghanistan.